एजेन्सी – यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल चरणको ड्र शुक्रबार न्योनमा सम्पन्न भएको छ ।
ड्रअनुसार क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडको सामना गर्ने भएको छ । बार्सिलोनाले लियोनलाई पराजित गर्दै अन्तिम ८ मा स्थान बनाएको हो भने युनाइटेडले पेरिस सेन्ट जर्मेनको चुनौती पार गरेको थियो ।
इटालियन क्लब युभेन्ट्सले डच क्लब आयाक्सको सामना गर्नेछ । आयाक्स साविक विजेता रियल म्याड्रिडलाई पराजित गर्दै क्वाटरफाइनल पुगेको थियो । रियललाई पछिल्लो ३ सिजन लगातार उपाधि दिलाएका रोनाल्डोले अब युभेन्ट्सबाट आयक्ससँग खेल्नेछन् । युभेले एटलेटिको म्याड्रिडलाई हराउँदै अन्तिम ८ मा स्थान बनाएको थियो ।
पछिल्लो सिजन उपविजेतामा सिमित भएको लिभरपुलले पोर्चुगिज क्लब एफसी पोर्टोसँग खेल्नेछ । लिभरपुलले जर्मन च्याम्पियन बायर्न म्युनिख र पोर्टोले एएस रोमालाई हराएका थिए । अर्को खेलमा दुई इंग्लिस टोली आमने-सामने हुँदैछन् । टोटेनहम हट्सपर र म्यानचेस्टर सिटीले एकआपसमा खेल्नेछन् । दुवै टोलीले जर्मन प्रतिद्वन्द्वीलाई हराएका थिए । टोटेनहमले बोरुसिया डर्टमुन्ड र सिटीले साल्केलाई पराजित गरेका हुन् ।
प्रतियोगिताको सेमिफाइनलको ड्र पनि सार्वजनिक भएको छ । टोटेनहम र सिटीको विजेताले आयक्स र युभेन्ट्सको विजेतासँग खेल्नेछ । बार्सिलोना र युनाइटेडबीच खेलको विजेताले लिभरपुल र पोर्टोको खेलको विजेतासँग फाइनल प्रवेशका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, चैत ०१, २०७५२०:०५
रहिमलाई रियलको आकर्षक प्रस्ताव
मलेसियाद्धारा नेपालसामु ६२ रनको लक्ष्य
आजको जर्मनी र स्विडेनबिचको खेलमा यस्तो नतिजा आएको खण्डमा जर्मनीको यात्रा आजैबाट टुंगिने !
सन् २०१८ नेपाली क्रिकेटका लागि धेरै फाइदाजनक ! यी हुन् नेपाली क्रिकेटका ५ उत्कृष्ट क्षण !